Mozilla Firefox 59 yakaburitswa nekuita pamwe nekuchengetedza kwekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla Firefox 59 yakaburitswa nekuita pamwe nekuvandudza kwekuchengetedza
Mozilla yakashanda mukugadzirwa kweFirefox kuvhura Firefox 59.0 "Quantum" kune ese mapuratifomu akatsigirwa akadai seGNU / Linux, macOS, Windows, uye zvakare nesystem yekushandisa nhare. Vazhinji vashandisi vanga vakamirira iyi nyowani nyowani, uye yatosvika kwatiri kuti tinakirwe neakanakisa yemahara yewebhu browser. Uye inouya nekuwanda kwekuvandudza, pakati pazvo patinogona kuratidza kuvandudza kunokanganisa kuvandudzwa kwekuita uyezve nekuchengetedza kwenzvimbo yedu.
Firefox 59 inounza nyowani cache system kuitira kuti iyo kurodha kwemapeji ewebhu kunokurumidza. Iyo sisitimu inotora mukana wezvese cache yemuno uye cache yemaseva anoenderana, kunakidzwa nekushomeka kwekufambisa, kusanganisira zvirimo zveFirefox Imba. Mamwe graphical maficha eFirefox akagamuchirawo mamwe maratidziro ekuvandudza iwo kutaridzika, kunyange izvi zvisiri izvo zveiyo Linux vhezheni, asi yeMac ...
Izvo zvakare zvinotendera kutsigirwa kwezvakakosha zvirevo kuti tikwanise kutora pane iyo Screenshots yakachengetedzwa, uye kunyangwe kugona kubvarazve chikamu chinoonekwa cheiyo skrini yatakachengeta. Vashandisi vanozokwanisawo kudhonza uye kudonhedza saiti paFirefox peji rekumusha kugadzirisa patsva iwo matabo nemahwindo atinofanira kugadzirisa. Zvimiro izvo pasina mubvunzo zvinokosheswa nekuda kwekushandisa zvirinani.
Iyo RTC kugona, kana chaiyo-nguva kutaurirana, kubva pawebhusaiti yeiyi vhezheni itsva. Kune izvi, iro RTP Transceiver basa rakaitwa kuti ripe kudzora kuri nani pamusoro pekufona kumapeji ewebhu. Uye kune avo vanoda zvirinani kudzikiswa kweprotocol rutsigiro, iyo WebExtensions API yakagadziridzwa. Ivo vakatorawo hanya nezve zvakavanzika zvinoshanda, vachibvumira kuvharira zvikumbiro zvitsva zvekuwana kamera yedu, maikorofoni, nzvimbo, zviziviso, nezvimwe, nehurongwa hwemvumo nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mozilla Firefox 59 yakaburitswa nekuita pamwe nekuvandudza kwekuchengetedza
Maitiro ekubhowa kubva kuUSB mu VirtualBox?
Amazon inobhejera pane yakavhurwa sosi kukwikwidzana neGoogle mubatsiri mumotokari